Published: January 5, 2016 18:01 PM
काठमाडौं, पुस २१ । एचआइभी संक्रमित बालबालिकाहरुलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित राजधानीमा गीति एल्बम ‘फर्माइस’को विमोचन गरिएको छ ।एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार राजधानीमा गीति एल्बम फर्माइसको विमोचन गरेका हुन् ।एचआइभी संक्रमित बालबालिकाका लागि युवाहरुद्वारा खोलिएको नेपालकै पहिलो...
मिस ग्रान्ड नेपाल आयोजना हुने
Published: January 5, 2016 13:15 PM
काठमाडौं, पुस २१ । नेपालमा विभिन्न किसिमका सुन्दरी प्रतियोगिताहरु हुने गरेका छन् । यसै क्रममा यस वर्षदेखि मिस ग्रान्ड नेपालसमेत आयोजना गर्न लागिएको छ । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मेरो लुक्स नामक संस्थाले मिस ग्रान्ड नेपाल प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । संस्थाले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार...
Published: January 5, 2016 10:34 AM
सिन्धुपाल्चोक ,पुस २१ । चर्चित कलाकार दम्पती धुर्मुस- सुन्तलीले सिन्धुपाल्चोक बराम्ची गाविसका भूकम्प पिडीतलाई न्यानो कपडा वितराण गरेका छन् । अत्यधिक चिसोका कारण भूकम्प पिडीतको कठ्याङ्ग्रीएर मृत्यु हुन थालेपछि उनीहरुले बराम्ची गाविसका ८ सय १६ परिवारलार्इ ब्ल्याङ्केट वितरण गरेका हुन् । धुर्मुस- सन्तलीको विशेष पहलमा नेपाली समाज टेक्सस अमेरिका ( NST)ले...
संगीतकार गुरुङलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आजीवन मासिक ३० हजार
Published: January 4, 2016 19:37 PM
काठमाडौं, २० पुस । सरकारले संगीतकार अम्बर गुरुङलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरेको छ ।बूढानिलकन्ठस्थित संगीतकार गुरुङको निवासमा पुगी सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले उनलाई सम्मान गर्दै मासिक उपचार खर्चबापत ३० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरे ।संगीतको माध्यमबाट देशका...
चित्रकला प्रदर्शनी सम्पन्न
Published: January 3, 2016 15:48 PM
काठमाडौं, पुस १९ । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थाबाट पाठ सिकेर पनि परिर्वतन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले नेपाल आर्ट परिषदमा ‘हामी उठ्ने छौँ’ भन्ने आह्वानकासाथ गरिएको चित्रकला प्रदर्शनी आज समापन भएको छ । विपतको बेलामा पनि आशा राखेर बाँच्नु पर्छ, समस्याबाट नै उठ्नु पर्छ भन्ने...
के गर्दैछिन नायिका श्वेता खड्का ?
Published: January 3, 2016 10:25 AM
काठमाडौं, पुस १९ । एक बर्ष अघि पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठ गुमाएकी नायिका श्वेता खड्का के गर्दैछिन भन्ने चासो शुभचिन्तकहरुलाई हुनु स्वाभाविकै हो । विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेकी उनी फिल्ममा फर्कने बताइए पनि तत्काल फिल्ममा नआउने सोचमा छिन । फिल्ममा आउनेबारे फिल्मी पत्रकारको प्रश्नमा उनले अहिले नै फिल्म क्षेत्रमा...
बिदेशी भूमिमा बसेर नेपाल भरिएको एउटा गीत(भिडियो)
Published: January 2, 2016 09:52 AM
काठमाडौं, पुस १८ । जन्मभूमिलाई माया नगर्ने मानिस को होला र ? त्यही जन्मभूमिलाई गीतको भिडियोमा उतारेर संगीतप्रेमीलाई नयाँ स्वाद चखाउने काम विरलै मात्र हुने गर्छ । तर जुनी जुनीसम्म आफ्नो जन्मभूमीलाई माया गरिरहने प्रण गरेका चितवनका संगीतकर्मी तुला पर्वत उदाहरणीय बनेका छन् । यस अघि नै ९ वटा भिडियो बजारमा ल्याइसकेका...
बेलायतका १० स्थानमा ‘गोर्खा कल्चरल नाइट’
Published: January 1, 2016 16:48 PM
काठमाडौं, पुस १७ । अंग्रेजी नयाँवर्षको अवसर पारेर बेलायतका १० स्थानमा बृहत ‘गोर्खा कल्चरल नाइट’को आयोजना हुने भएको छ ।कार्यक्रममा नेपालबाट गायिका इन्दिरा जोशी, लोकगायिका सुनिता दुलाल, नृत्य निर्देशक गोविन्द राई बेलायत गएका छन् ।कलाकारहरुले पहिलो प्रस्तुति २ जनवरीमा फार्नबोरो ओकफार्म कम्युनिटी हलमा दिने भएका छन्...
पाकिस्तानी गायक अदनान सामी नयाँ वर्षसँगै भारतीय बने
Published: January 1, 2016 09:53 AM
मुम्बई, पुस १७ । पाकिस्तानी गायक अदनान सामीका लागि नयाँ वर्ष २०१६ निकै खास बनेको छ । वर्षको सुरुवात मै उनले भारतीय नागरिकता पाएका छन् । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार गायक सामीलाई भारत सरकारले नागरिकता दिएको छ । जनवरी १ देखि लागू हुने गरी उनलाई भारतीय नागरिकता दिइएको हो । ४६ वर्षीय...
हमालले केक खुवाएपछि सुरु भयो ‘हामी उठ्नेछौं’ चित्रकला प्रदर्शनी
Published: December 31, 2015 09:04 AM
काठमाडौं, पुस १६ । काठमाडौंको बबरमहल स्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा ‘हामी उठ्नेछौं’ शीर्षकमा सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी बुधवार देखि सुरु भएको छ । नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालले ‘हामी उठ्ने छौं’ को लोगो अंकित चित्र अनावरण गरेर चित्रकला प्रदर्शनीको उदघाटन गरे । हमालले चित्रकला प्रदर्शनीमा...
तीन खान यसरी चर्चामा तानिए वर्षैभरी
Published: December 28, 2015 12:04 PM
मुम्बई, पुस १३ । सन् २०१५ मा बलिउडभित्र धेरै खल्बली मच्चियो । ती खल्बलीका केन्द्र भने बलिउडमा ‘तीन खान’ भनिएका सलमान, शाहरुख र अमिर खान नै रहे । संयोग नै भन्नुपर्छ, ५० वर्षको उमेर पुरा गरेका यी तीनै अभिनेता वर्षभरी कुनै न कुनै रुपमा चर्चाको केन्द्र बनिरहे । सलमान खान...
राजमार्गमा कुचो बोकेर उत्रिए धुर्मुस र सुन्तली
Published: December 27, 2015 14:42 PM
चन्द्रनिगाहपुर, पुस १२ । सरसफाईका लागि सद्भावना दूत एवं कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुन्जना घिमिरे (सुन्तली)को सहभागितामा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा राजमार्ग सफाई गरिएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अन्तर्गत रौतहटको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र सदरमुकाम गौर जाने बीरेन्द्र राजमार्गमा सफाई गरिएको...
बलिउड अभिनेत्री साधनाको निधन
Published: December 25, 2015 14:45 PM
काठमाडौं, पुस १० । हिन्दी चलचित्रकी प्रख्यात अभिनेत्री साधना शिवदासानीको शुक्रबार निधन भएको छ । केही दिनदेखि बिरामी साधनाको ७४ वर्षको उमेरमा मुम्बईको हिंदुजा अस्पतालमा निधन भएको हो ।‘आरजु’, ‘मेरे मेहबुब’, ‘लव इम शिमला’, ‘मेरा साया’ जस्ता दर्जनौं चलचित्रकी अभिनेत्री साधनाको निधनप्रति बलिउडका...
तरकारी पसले ‘मुन्द्रे’ कसरी चर्चित कलाकार बने ?(भिडियो हेर्नुहोस)
Published: December 23, 2015 17:13 PM
काठमाडौं, पुस ८ । चर्चित हास्यंकलाकार जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ ले तरकारी पसले, गार्मेट उद्योगको मजदुर हुँदै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । क्याम्पसे जीवन छँदै नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा होमिएका उनी सहकारी पसल संचालक सरस्वती शर्माको सहायतामा टेलिभिजन कार्यक्रम ‘हिजोआजका कुरा’का बाट नेपाली कलाकारितामा प्रवेश...
मिस फिलिपिन्स बनिन् ‘मिस युनिभर्स’, मिस कोलम्बियाको शीरमा दुई मिनेट पनि टिकेन ताज
Published: December 21, 2015 15:51 PM
काठमाडौं, पुस ६ । फिलिपिन्सकी सुन्दरी पिया अलेन्जो वुर्टजबाकले ‘मिस युनिभर्स २०१५’ को उपाधि हासिल गरेकी छन् । अमेरिकाको लस भेगासमा आयोजित समारोहमा उनलाई विजेता घोषित गरिएको हो । तर विजेताको घोषणा गर्नुअघि कार्यक्रमले नाटकीय मोड लिएको थियो । अन्तिम चरणमा उदघोषकले मिस...